« Salon Arga » : fanindroany nahazo loka i Jean Andrianaivo Ravelona | NewsMada
« Salon Arga » : fanindroany nahazo loka i Jean Andrianaivo Ravelona
“Vers le centre de l’univers…”. Tamin’ny alalan’io hosodoko io no nandrombahan’i Jean Andrianaivo Ravelona ny « Prix Manet », anaran’ny loka lehibe indrindra amin’ny hetsika « Salon Agra », tany Gagny Frantsa. Tontosa ny asabotsy teo ny lanonana nanoloran’ny mpitsara izany loka izany.
Tsy vao izao fa efa fanindroany ity andrarezin’ny hosodoko malagasy ity no nambabo ny mpitsara amin’ity “salon”, fanao isan-taona ity. Tamin’ny taona 2008 ny voalohany. Araka izany, tsy takona fa tena miharihary ary mandresy lahatra ny maro, hatrany ivelany any, ny talentan’ny mpanakanto malagasy. Marihina fa andiany faha-43 amin’ny « Salon Agra » ny tontosa ny asabotsy sy alahady lasa teo.
Hetsika lehibe iray manome lanja ny sokitra sy ny hosodoko ny “Salon Agra”. Mahasarika olona maro, avy amin’ny firenen-tsamihafa, izany. Ao ny mpahay zavakanto, mpankafy sokitra na hosodoko. Misy koa mpizahatany sy olon-tsotra, liana amin’ny zavakanto avy amin’ny firenena maro. Marihina mantsy fa avy amin’ny vazantany efatra ny mpandray anjara, mifaninana, mandritra ity hetsika ity.
Tamin’ity andiany faha-43 ity, ohatra, nahatratra 64 ny mpanao hosodoko naneho ny talentany. Teo koa ny mpanao sokitra miisa sivy. Niavaka tamin’ireo rehetra ireo ny an’i Jean Andrianaivo Ravelona. Voninahitra lehibe ho an’ny zavakanto Malagasy izany.